2021 NYC White Label Expo Onye nrụpụta onye ndu nke afọ nyere GVB Biopharma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » 2021 NYC White Label Expo Onye nrụpụta nke Afọ nyere GVB Biopharma
2021 NYC White Label Expo Onye nrụpụta nke Afọ nyere GVB Biopharma
GVB Biopharma, onye ndu na hemp-ewepụtara cannabinoid mmepụta ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na imepụta akara ngwaahịa ọcha, mara ọkwa taa na akpọpụtala ya onye nrụpụta onye ndu nke afọ na 2021 New York City White Label Expo. Ihe omume a, nke a na-eme kwa afọ na ọdịda, na-arụ ọrụ dị ka ihe ngosi mbụ na ihe ngosi ihe ngosi maka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị.
Ihe nrite a na-amata onye nrụpụta pụtara ìhè nke ngwaahịa akara ọcha, nke na-enye ohere ịmegharị aha ndị ọzọ. Ihe ngosi White Label Expo na-akọwa njirisi nhọrọ atọ maka onye na-eduzi ndị na-emepụta ihe na-enweta onyinye nke afọ: mmekọrịta ntụkwasị obi na ndị ahịa ha, usoro njikwa mma na-eduzi ụlọ ọrụ na ahụmahụ ndị ahịa enweghị nkebi. A họpụtara ndị ikpeazụ atọ, na GVB Biopharma ahọpụtara ka onye mmeri n'etiti ụlọ ọrụ 400 tozuru oke. Ihe nrite a bụ otu n'ime nkwanye ugwu ụlọ ọrụ anọ enyere maka ịrụ ọrụ pụtara ìhè n'akụkụ n'ichepụta, mmepụta ngwaahịa, ọrụ na ịde aha onwe.
"Anyị na-agbasi mbọ ike ịkwalite ụlọ ọrụ ahụ site na ngwaahịa ọhụrụ yana ụkpụrụ nnabata dị elu," Phillip Swindells, Onye isi ọrụ GVB Biopharma kwuru. A ghọtara ụlọ ọrụ ahụ na White Label Expo maka nrụpụta na nhazi nhazi ya, nke mepụtara ụkpụrụ ụlọ ọrụ ọhụrụ maka njikwa mma na iguzosi ike n'ezi ihe.
Ike nke usoro nnabata GVB Biopharma na ụkpụrụ ịdị mma ngwaahịa emeela ka ọ bụrụ aha a na-akwanyere ùgwù nke ọma na ụlọ ọrụ hemp cannabinoid. Tinyere ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ maka nhazi hemp na Oregon, ọrụ ndị na-ere ahịa na-acha ọcha na Las Vegas, yana ụlọ ọrụ ahịa mba dị na Los Angeles, Chicago, Denver na South Florida, GVB egosipụtala ikike maka nnukwu uto. . Ọnụnọ ya buru ibu nke mba na nke zuru ụwa ọnụ na-enye ya ohere igbo mkpa na-agbawa agbawa maka hemp cannabinoids wee bụrụ onye mmekọ ụlọ ọrụ dị mkpa maka ndị ọchụnta ego na ụdị na-egbo mkpa ahịa a.